Depiote Roberthine Rabetafika : Mpanakorontana sady tsy mahalala fomba -
AccueilSongandinaDepiote Roberthine Rabetafika : Mpanakorontana sady tsy mahalala fomba
Depiote Roberthine Rabetafika : Mpanakorontana sady tsy mahalala fomba
Tsy tanteraka ny fivorian’ireo solombavambahoaka izay natrehin’ny mpikambana eo anivon’ny governemanta noho ny fanakorontanana nataon’ireo depiote sasantsasany tamin’izany, omaly maraina.
Nisy mantsy ny adihevitra amin’ny tokony anatrehan’ny mpikamban’ny governemanta na tsia izany. Rehefa izay, niroso tamin’ny tsangan-tanana ireo solombavambahoaka ka dia lanin’ny maro an’isa fa afaka mijanona manatrika izany fivoriana izany ihany ireo mpikamban’ny governemanta notarihin’ny praiminisitra.
Tampoka teo anefa, nisy ny filam-baniny nataon’ireo depiote sasantsasany, izay azo lazaina fa vitsy an’isa, ny amin’ny tokony hanatrehan’ny mpanao gazety izany fivoriana efa voafaritra fa tsy azo atrehina izany.
Noho izay indrindra, raikitra teo ny adihevitra. Tsy nijanona hatreo anefa izany fa nitohy tamina savorovoro mihitsy aza. Noho izay indrindra, nampiatoana ny fivoriana ary nahemotra ho amin’ny tolakandro ny andron’ny omaly ihany.Fa anisan’ny nampiteraka savorovoro sy horakoraka tao amin’ny efitrano fivoriana teny amin’ny Antenimieram-pirenena ny fihetsiky ny depioten’Isandra, Roberthine Rabetafika Norovelomampionona. Rehefa iny izy nandray fitenenana iny mantsy, niseho amin’izay tsy fahalalam-pomban’ity solombavambahoaka ity. Tsy nisy intsony na fanajana ireo azo lazaina ho vahiny eny amin’ny Antenimeram-pirenena, ny mpikambana eo anivon’ny governemanta sy ireo mpanao gazety ary indrindra fa ireo mpikamban’ny birao maharitra nitarika ny fivoriana sy ireo depiote namany nanatrika ny fotoana.
Tsy vitan’izay fa teo ihany koa ny nanivaivaina ireo mpanao gazety marobe tonga nanatanteraka ny asany amin’ny fanangonam-baovao teny an-toerana. Noroasin’ity solombavambaohoaka voafidy tao amin’ny distrikan’Isandra, Faritra Matsiatra Ambony, ity mantsy ireo mpanao gazety nanatanteraka ny asany tao amin’ny efitrano fivoriana fa nolazainy fa “maimbo helika” ary “manempotra” azy. Sorena, noho izay vava tsy voaambina izay ireo mpanao gazety, ary tsy nisy nanaiky ny nivoaka ny efitrano narahina horakoraka, sns.
Araka ny tsilian-tsofina anefa, depiote tsy tian’ny mponina any amin’ny distrikan’Isandra akory ity miseho milay sy tsy mahalala fomba ity. Fa ity depiote ity angamba mihevitra azy ho manitra tsy kasihin-dalitra? Azo tarafina amin’izany toetrany izany ihany ny fomban’ity depiote Roberthine Rabetafika Norovelomampionona ity eny anivon’ny fiarahamonina misy azy. Tsy mendrika akory ny atao hoe solombavambahoakan’i Madagasikara miaraka amin’ny volo miloko nefa misolo vava ny vahoaka avy any amin’ny misy azy. Ambava homana, am-po mieritra.